Maxaa Ku Soo Kordhay Kacdoonkii Dunida Muslimka…Wararkii U Dambeeyay | Xaqiiqonews
Maxaa Ku Soo Kordhay Kacdoonkii Dunida Muslimka…Wararkii U Dambeeyay
Kacdoonkani oo haL ku dhig loogu dhigay “Rasuulka Allow”, ayaa aad u ruxay dunida carabta iyo dalalka muslimiinta, arintaasi oo falcelin u ah falalkii nabiga scw Lagu xumeeyey ee kartoonada Faransiiska.
Magaalada Dhaka, oo ah caasimada Bangladesh, tobanaan kun ayaa dhigay mudaharaadyo ka dhan ah Faransiiska iyaga oo codsaday, in la qaadaco wax soo saarka Faransiiska.
Magaalada Karachi ee Pakistan, banaanbaxyadu waxay cambaareeyeen hadalada Macron, iyagoo dalbanaya in la qaadaco wax soo saarka Faransiiska.
Falastiiniyiinta waxay sidoo kale banaanbax ka dhigeen magaalada Ramallah ee Daanta Galbeed, si ay u cambaareeyaan hadalada Macron ee uu ku aflagaadeynaayo Islaamka.
Dhanka kale Magaalada Burco ee gobolka Togdheer banaan baxyo ka dhacay waxaa isagu soo baxay boqolaal dad ah oo sitay boorar ay ku qoran yihiin hadallo ka dhan ah Faransiiska iyo Macron.
Kacdoonkani waxa uu ku soo beegmay xilli 13 waddan oo Carab iyo Islaam ah ay cambaareeyeen hadaladii nacaybka iyo xadgudubka ahaa ee Macron uu ugaystay islaamka iyo muslimiinta, iyo kor u kaca ku yimid hadalada dadweynaha ee kicinaya aflagaadada diimaha.
Dalka Masar guddi ay leeyihiin garyaqaanada muslimiinta waxa go’aansadee dacwo maxkameed ka dhan ah wargeyska “Ebdow” oo dhowr mar nabiga u gafay.
Magaalada Tehran, Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Iiraan waxay u yeertay Danjiraha Faransiiska, Florent Idallo, si wax looga weydiiyo xadgudubka Faransiiska ee ka dhanka diinta Islaamka iyo Rasuulka SCW.
Sacuudi Carabiya ayaa sidoo kale cambaareysay falalka aflagaadeynta Nabiga, iyo isku day kasta oo la isku xiriirinaayi Islaamka iyo argagixisada, Balse Sacuudiga wax mowqif ah kama soo saarin baaqyada lagu qaadacayo alaabada Faransiiska.
Ururada islaamiga ah ee caanka ka ah Indonesia waxay ku eedeeyeen Macron inuu doonayo sumcadxumeynta diinta Islaamka, waxayna hadaladiisa ku sharxeen kuwa ka hor imaanayaan qiyamka dimoqraadiyada ee Faransiisku qaatay.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyib Erdogan waxa uu “nin xanuunsan” ku tilmaamay Macron , wuxuuna ugu baaqay shacabka Turkiga inay qaadacaan alaabada Faransiiska.
Midowga Yurub waxa ay Turkiga ka dalbadeen in uu dib uga laabto go’aanka qaadacaadda alaabta faransiiska, iyaga oo ka codsaday Turkiga in uu ixtiraamo heshiishyada midowga yurub uu la saxiixday.
Dhanka kale Faransiiska Ayaa uga baaqay muwaadiniintiisa dibadda ku sugan in ay digtoonaadaan, madaama ay kor u sii kaceyso carada muslimiinta ee ka dhalatay aflagaadeyntii Rasuulka.